Olona maro no voakasik’izany raha ny vaovao azo omaly toy ireo olona tratry ny aretina tiberkilaozy na raboka nefa rehefa omen’ny dokotera fanafody mifandraika amin’izay dia tsy mety sitrana intsony. Antony maro no mahatonga izany raha araka ny fanazavan’ny profesora Julio Rakotonirina minisitry ny fahasalamam-bahoaka tamin’ny mpanao gazety omaly. Anisan’ireny ny fampiasana fanafody tsy manara-penitra, ny fividianana fanafody eny anelakela-trano, indrindra ny fampiasana ireny karazam-panafody famonoana bibikely ireny amin’ny karazana fambolena. Tsy maintsy handray fepetra hoenti-miady amin’izany ny minisitera telo tonta, dia ny minisiteran’ny fahasalamana, ny tontolo iainana ary ny fiompiana sy ny jono. Raha ny tarehimarika voaray omaly mantsy dia mety hahafaty olona manodidina ny 10 tapitrisa ny tsy fahombiazan’ny fampiasana fanafody hatramin’ny taona 2050 maneran-tany raha tsy voafehy. Natsangana ny drafitrasam-pirenena handresena izany na ny PAN RAM izay hiasa hatramin’ny taona 2023.